MEETNI NAMA HARKA JIRU DHAGAA FAKKAATA | Fighting for Freedom and Equality
April 16, 2013 at 8:23 pm · Gadaa.com
Baatiilee 10 dura (Waxabajjii 2012) barreeffama mata duree “Meetni Nama Harka Jiru Dhagaa Fakkaata”jedhu kana oggaan barreessu, adeemsi marii kan amma ‘ADO/ODF’ dhalchuudhaan xumurame kun jalqabamee reefuu gara baatii lamaa gaha ture. Yeroo sanatti namootni ‘Marii’ sana irraa hirmaachaa turanii fi ala taa’anii deggeran kan nuun jechaa turan “Dhimmi rakkinoota QBO waan nu yaachiseef mari’annee waan fala/furmaata irra wayyaa tahuun gadi bahuuf akeekkanne” dha. Namoota adeemsa ‘Marii’ sana ija shakkiitiin ilaalanii mormaa turaniin ammoo wanti dubbatamaa fi barreeffamaa ture faallaa kanaa ture. Anis yaaddoo fi shakkii namoota waan sana mormanii irra guddaa isaa kanin qooddadhu tahu illee, yoo bifa ijaaraa taheen qooda gama keenyaa gumaachuudhaan itti dirmanne tarii sodaa fi yaaddoo ture sana danda’amu hanqisuu, dadhabamu ammoo xiqqeessuu, hin dandeenyuu laata? abdii jedhuunin yeroo sanatti waan kana barreesse.
Bilisummaan kadhaa/tolaa yookaan ammoo kan karaa qaxxaamuraa (short
cut) argamu inuma hin jirre. Humna jaarmayaa caalaa namoota dhuunfaatti amanuu, abdachuu fi waan ajaa’ibaa ‘Miracle’ irraa eegachuun dogoggora guddaa dha. Hanga ammaatti QBO hoogganee galmaan gahuuf abdiin Ummatni Oromoo qabu tokkichi ABO qofa. Kan ABO caalu nuuf hin dhalatin hin jennu. Garuu hanga ammaatti kan isa caalu hafnaan kan isaan dorgomu illee hin jiru. Kanaaf isa harkaa qabnu haa jabeeffannu. “Meetni Harkaa Qaban Dhagaa Fakkaata” jedha Oromoon!
← Labsa Guyyaa Gootota Oromoo – Adda Bilisummaa Oromoo
Voice of Oromiyaa: Gaafif Deebii Jaal Galaasaa Dilboo Waliin Goone →
One comment on “MEETNI NAMA HARKA JIRU DHAGAA FAKKAATA”
yasyasre on April 17, 2013 at 3:16 pm said:
Internet hin jiru du’ee jira awwaala isaa kan malas Zenawii ladaa biraa gonaa jennee yaana